Fitoerana eo ambonin'ny seza fiandrianany
"Izay maharesy dia havelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarahako nipetraka amin 'ny Raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany." Apok. 3:21.
Afaka mandresy isika, eny, amin'ny fahafenoana sy fahatanterahana. Maty ho antsika i Jesôsy mba hanomezana lalana ahafahantsika miala ny ratsy, mba ahafahantsika mandresy ny fahadisoana rehetra, manohitra ny fakam-panahy, ka hipetraka miaraka Aminy eo ambonin'ny seza fiandrianany. Tombontsoa ho antsika ny fananana ny finoana sy ny famonjena. Tsy nihena akory ny herin'Andriamanitra; mbola omena maimaimpoana izany amin'izao fotoana izao toy ny taloha, fa ny fiangonana no tsy manana intsony ny finoana enti-mangataka ny hery hoenti-mitolona, toy ny nataon'i Jakoba raha niteny hoe: "tsy havelako handeha hianao, raha tsy tahinao aho." — Gen. 32:26. Maty efa ela ny finoana manam-paharetana; tokony hovelomina indray ao am-pon'ny vahoakan'Andriamanitra izany; tokony hangataka fitahiana izy ireo. Misintona antsika hiakatra any amin'Andriamanitra sy ny voninahitra ny finoana, dia ny finoana velona; mandentika antsika hidina any amin'ny maizina sy ny fahafatesana kosa ny tsy finoana.
Maro no variana amin'ny fiahiana ny fiainana eto amin'izao tontolo izao sy ny fahasahiranany, ka tsy manam-potoana firy hivavahana, na tsy dia miraika loatra amin'ny fivavahana. Mety manaraka ny fombafombam-pivavahana ihany izy ireo, saingy tsy hita ao anatiny ilay fanahy mitalaho. Nihataka tamin'ilay modely ny olona toy izany. Tena faka-tahaka tamin'ny fivavahana i Jesôsy, Ilay fitaratra; endrey ny hafanam-po sy ny fivaivain'ny fitalahoany! Raha Izy, Ilay lahitokan'Andriamanitra aza nohetsehin'ny fireteham-po tahaka izany sy ny fijaliana noho ny amintsika, manao ahoana ny ilantsika ny fitoloman'ny fanahy amin'Andriamanitra, isika izay miankina amin'ny lanitra mba hahazo hery.
Tsy tokony ho afa-po isika raha tsy voaboraka avokoa ireo ota fantatsika, ary tombontsoa ho antsika ary tokony atao ny mino fa mandray antsika Andriamanitra. Tsy tokony hiandry ny hafa isika hamaky ny haizina ka handrombaka ny fandresena mba hifaliantsika; tsy maharitra mantsy ny fifaliana toy izany. Amin'ny fitsipi-pitondran-tena no tokony hanompoana an'Andriamanitra fa tsy amin'ny fihetseham-po. Maraina sy hariva no tokony hahazoantsika ny fandresena ho antsika, ao amin'ny ankohonantsika; tsy tokony hisakana antsika tsy hanao izany ny asa aman-draharahantsika isan'andro. Tokony haka fotoana ivavahana isika, ary rehefa mivavaka dia tokony hino isika fa mandre Andriamanitra. Mety tsy ho azontsika eo no ho eo mandrakariva ny valiny; izany anefa no fitsapana ny finoana. Tsapaina isika raha mbola matoky an'Andriamanitra, raha mbola manana finoana velona, finoana tsy miovaova. — RH, 04 Septambra 1883.